VLC waa mid ka mid ah ilaha iskutallaabta ciyaaryahan warbaahinta madal ugu caansan, xor ah oo furan laga heli karo maanta. Waxay leedahay qaab in ka ciyaari karaa dhammaan noocyada kala duwan ee files multimedia on top of DVDs, CD-yada, Audio, VCDs iyo kuwo kale oo badan. Waa maxay sidaas u wanaagsan oo ku saabsan VLC waa xaqiiqda ah in uu diyaar u yahay qalab kasta oo ka mid ah ka fikiri karaa, waxa ay noqon Windows, Mac, Android, ama iPhone, VLC waddaa nidaam kasta oo hawlgalka caan ah oo la heli karo maanta.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah xiriir ka meesha aad kala soo bixi kartaa oo wuxuu ku raaxaysan VLC 64 waxoogaa on your computer.
VideoLAN (Si Rasmi Ah) - http://www.videolan.org/vlc/
VLC taageertaa kala duwan oo badan oo ka kooban. Waxaa ka ciyaari kara videos, xataa haddii ay waxyeelo, diiqid ama aan dhameystirneyn, sida faylasha in ay weli lagala soo asaaga ah in ay kuwa iskufilka network (P2P). Waxaa kale oo u ciyaara m2t MPEG durdurrada gaadiidka (.TS) files iyagoo weli ku jira geeddi-socodka ah ee lagu digital ah ka camera HDV ah via cable FireWire taas oo ka dhigaysa waxaa suurto gal ah si ay ula socdaan video ah marka la ciyaaray ah. Waxa kale oo ay u isticmaali karaan si ay u helaan libcdio files .iso si users ciyaari karo files on image disk ah, xitaa marka nidaamka qalliinka user ee aan si toos ah ula images .iso shaqeyn karaan.
VLC taageertaa qaabab oo dhan audio iyo video ay taageerayaan libavcodec iyo libavformat. Taas macnaheedu waa in VLC dib ciyaari karo H.264 ama MPEG-4 Qeybta 2 video iyo sidoo kale taageerada FLV ama file MXF qaabab "baxay sanduuqa" isticmaalaya maktabadaha FFmpeg ee. Haddii kale, VLC ayaa modules u codecs in aan ku salaysan maktabadaha FFmpeg ee. Waxaa sidoo kale ka mid ah ciyaartoyda DVD software free in iska dhega sireed gobolka DVD on RPC-1 firmware drives, waxaa ciyaaryahanka gobolka-free ah samaynta. Si kastaba ha ahaatee, waxa aanu isla RPC-2 firmware drives sameeyo, sida in kiisaskan sireed gobolka waxa meelmariya drive laftiisa, si kastaba ha ahaatee, weli caayaan-qasbi karin sirta CSS ay ku ciyaaraan shisheeye-gobol DVD on RPC ah -2 drive. VLC ciyaaryahan warbaahinta uu leeyahay qaar ka mid ah sida diirada in ay xarrifaan karaan, isku shaandheyn, kala, de-isugu xidhanyihiin, iyo videos muraayad iyo sidoo kale la abuuro derbiyada bandhigay ama ku darto logo dahaadhaa ah. Waxa kale oo ay awooddo video saarka sida ASCII tahay.
VLC 64 yara ciyaaryahan warbaahinta ayaa design ah qaybsan, sidaas awgeed way user cajiib saaxiibtinimo. Waxay leedahay in ka badan 380 qaybood, oo dhan sababta oo ah design qaybsan taas oo ka dhigaysa in ay u fududahay in ay ka mid tiro badan oo ah modules / plugins u qaabab file cusub, codecs ama hababka geeyo kala duwan. Dhab ahaantii, waxay abuurtaa ay garaaf u gaar ah oo modules dynamically, waxayna ku xiran tahay xaaladda iyo ku salaysan hab maamuuska aqbasho, codec, qaab file, awoodaha card video iyo koobin kale oo badan oo la mid ah.
Tan iyo markii ay ku dhowaad wax kasta oo VLC waa module ah, VLC ee xudunta u abuurtaan kartaa mid, dad badan oo ama interfaces ma at dhan. Taas ayaa ka dhigaysa in ay interface aadka u la qabsan kara oo customizable. Dhab ahaantii, la isticmaalayo interface skins2 ah, VLC dhab ahaantii taageertaa kala duwan oo badan oo harag dibadda iyo sidoo kale, ay ka mid yihiin kuwa loogu talagalay Winamp 2 iyo XMMS. Guud ahaan, tayada xigmad leh, VLC joogo uruursanayey talooyinka marka loo eego tartanka la ekaan iyo sare.
Iyo, waxan oo dhan ku yimaado xirmo yar oo ah 28,45 MB taas oo ah tirada file rakibidda VLC 2.2.1 64 xoogaa ah, in aan la ilaawin in la heli karo luqado kala duwan sida Spain, Sweden, Thailand, Holland iyo qaar badan.
Waafaqsan yahay nidaamyada hawlgalka kala duwan
Marka la eego in VLC waa madal cross ciyaaryahan warbaahinta , waxa maamula kartaa nooc oo kala duwan oo ah Windows, OS X, macruufka, Linux, Android, BSD, BeOS, OS / 2, baabuur, dhawaaq iyo QNX. Waxa xitaa loo isticmaali karaa barnaamijyo kale oo badan oo ay ku jiraan noocyo kala duwan oo badan oo isdiyaari, plugins browser, eMule, KCeasy, Miro, gacan-jabis iwm
Sida loo isticmaalo VLC
Hadda, aynu baadhi karo sida aad u isticmaali karto ciyaaryahanka VLC in ay sameeyaan wax faa'iido leh oo anfacaya kala duwan.
1) AirTune Streaming - shaqeynta A for Apple ee Airport Express, waxaa u ogolaanaya inuu u ciyaaro mid ka mid files warbaahinta aad ku hadla rikoodh guriga. VLC taageertaa AirTune Streaming.
2) Yaree ciyaaryahan VLC nidaamka saxaarad - Waxa kale oo aad la yareeyo karaa VLC nidaamka aad saxaarad, arki shaashadda hoose ee jidka loo sameeyo.
3) Beddelaan files adiga oo isticmaalaya VLC - Tani waa muujinta cajiib ah oo VLC. Waxaad si qaabab kala duwan loogu badalo kartaa files warbaahinta. Tusaale ahaan, file mp3 ah waxaa loo rogi karaa in ay ACC, mp4 , OGG , TF ASF iwm xitaa Waxaad u bedeli karaan PDF in mp3 / mp4 si ay u la akhrisan kartaa sida faylasha multimedia on Qalabka telefoonada gacanta. Ma aha in feature qabow?
4) shaashada aad video - Iyadoo VLC, mid ka mid ah xitaa qaadan kartaa Screenshot of videos, xataa marka loo maqli ah. Si aad u qabsadaan si dhekhso ah, u tag Menubar> Video> Sawirka.
5) Play subtitles - Marka ciyaaro filim ma waxaad laga yaabaa in had iyo jeer waxay fursad u ciyaaro subtitles. Xaaladda noocaas ah waxaad kala soo bixi kartaa subtitles ka website sida moviesubtitles.org. Waxaad sidoo kale magaca kartaa file u Cinwaan in ay isu barbar magaca filim ama aad browser file ah si ay u gudato karo. Xaaladdan oo kale hore (ka bedelayaan faylka) ciyaari faylka iyo si fudud u xaq-riix shaashadda oo taga si subtitles, waxaad la yaabi doontaa! Subtitles waxaa horay u suurta! In kiiska ka dib, waxaad gacanta isticmaali kartaa file subtitles iyo awood ay File> File Open> Hubi checkbox Isticmaal subtitles ah> faylka dhirtuba> play.
6) Control iyo astaysto VLC - Mid ka mid xakamayn karo si fudud ciyaaryahan VLC la keyboard / farxad buka isticmaalaya Hotkeys iyo qabtaa shaqooyin kala duwan sida ku biiray shaashad buuxda, bilaabi loo maqli karo, ku xasil ciyaaro, speedup ama loo maqli gaabis ah ama gudub qeybta ku xigta.
7) videos View la yar interface - Waxaad xitaa ka daawan kartaa videos on VLC in shaashad buuxda oo weli sidoo ilaaliyaan ah oo ku saabsan codsiyada kale waqti isku mid ah.
8) Habee interface VLC ah - ciyaaryahanka VLC ku siinayaa wax badan oo ku saabsan xoriyadda marka ay timaado Iyada oo ay interface. Waxaad samayn kartaa ciyaaryahan fiiriyaa midabo badan iyo fanaaniinta sida aad u fadlan.
Wondershare Player, Sida VLC, ayaa diyaar u ah Windows, Mac iyo Android sidoo kale ka ciyaari kara kasta qaab maqal iyo muuqaalka leh. Mid ka mid ah sidoo kale waxa ay ku xidhan karto qalabka fara badan iyo waafajinta maktabadaha ay. Waxa ay taageertaa downloads, akhriya DVDs, kaamirada, warbaahinta diiwaan kumbiyuutarada, laptops, telefoonada smart iwm Waxa kale oo ay bixisaa caadiga ah iyo sidoo kale audio tayada HD iyo video geeyo.
Wondershare Player Waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu dhaqsiyaha badan warbaahinta in ciyaari karo files music video iyo goobtii aan kala carar kasta. Mid ka mid ah sidoo kale in Mozilla karaa wali caddayn tayo sare leh, wax ciyaaryahan oo warbaahinta ugu kale ka maqan sida ka muuqatay. Waxay leedahay muujinta kale oo cajiib ah kaas oo u ogolaanaya auto xiritaanka ee mashiinka ka dib markii loo maqli karo. In ay mid ka mid ah qurbaanno ugu dambeeyey ee suuqa, waxa uu leeyahay qaar ka mid ah muuqaalada fiican in ay yihiin hab ka fiican yahay tartanka.
Waxaan aad ugu boorinayna in aad isku daydo, waxaad kala soo bixi kartaa Wondershare Player .
> Resource > VLC > Download VLC 64 yara habsami leh!